Lasa fahafinaretana ny manely tsaho Tena azo tsapain-tànana ny loza aterany
Harinkarena Amerikana Nidina 0,5%
Tsy mitovy hevitra ny antenimieran-doholona sy ny kongresy amerikana ny amin’ny teti-bola fampandehanan-draharaha indrindra manoloana ny tetikasan’ny filoham-pirenena Donald Trump ny hananganana ny rindrim-be manasaraka an’i Etazonia sy Meksika.
Firenena eoropeanina Efa miditra amin’ny fahasahiranana ara-toekarena
Miadam-pamindra tanteraka ny toekarena ao amin’ny firenena eoropeanina, indrindra ireo mikambana ao amin’ilay atao hoe zone euro amin’izao fotoana izao.
Lanonam-panjakana eny Iavoloha Hiompana amin’ny inona ?
Raha tsy misy ny fiovana dia amin’ny alatsinainy 7 janoary 2019 ho avy izao no hanatanterahana ny lanonana fifampiarahabana ofisialy noho ny taona vaovao eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha.
Herisetra tamin’ny fifidianana sy tsiambaratelon’ny dahalo Nijoro vavolombelona Randriamampandry Adolphe
Olom-pirenena iray tafahaona tamin’ny Tia Tanindrazana (TT) Atoa Randriamampandry Adolphe. Mendri-piderana ny fihetsiny sahy nijoro vavolombelona tamin’ny teti-dratsy sy herisetran’ny fifidianana ary namoaka tsiambaratelo mety tsy mbola fantatry ny besinimaro momba ny asan-dahalo.
ANDRAIKIBA-ANTSIRABE: TOVOLAHY NANAO TOURNAGE, MATY AN-DRANO
Namono olona indray ny farihin'Andraikiba omaly alakamisy 13 desambra 2018 tolakandro.
Anisan’ny loharanom-baovao faran’izay haingana ireo tambajotran-tserasera toy ny facebook sy ny twitter ary ny instagram sy ny tariny saingy matetika dia faran’izay tsy mari-pototra ihany koa.
Saika io avokoa no nipoiran’ireo tsaho sy honohono ary lainga rehetra ary nahatonga olona maro tany am-ponja mihitsy. Tsy hidirana lalina intsony ny mikasika azy ireny fa ny tiana antitranterina fotsiny dia ny hoe tsy mbola nisy soa hita ho nateraky ny tsaho loatra aloha fa saika nampidi-doza foana izy ireny. Tranga nampivarahontsana vao tsy ela ny nitranga tany amin’iny faritr’i Fenoarivo Atsinanana iny. Tao amin’ilay kaominina antsoina hoe Ambodiazinina, raha ny marimarina kokoa. Tsaho no nahatonga ireo polisy telolahy ho matin’ny fitsaram-bahoaka. Nisy ny firosoan’ny mpitandro ny filaminana tamin’ny fisamborana ireo noheverina fa tompon’andraikitra tamin’io fitsaram-bahoaka io ary efa ho 20 isa mahery ireo voasambotra. Ankehitriny ihany koa dia lasa toy ny haolo ilay tanàna noho ny fahatahoran’ireo mponina mbola hosamborina na dia efa niezaka nidina tany an-toerana nanazava ny sain’izy ireo aza ireo tomponandraiki-panjakana fa tsy misy tokony hatahorany intsony. Sekoly EPP miisa 9 sy CEG miisa 2 no voatery nikatona. Vokatry ny tsaho, honohono, lainga, fita-bitro sy ny tariny daholo anefa izany.